Kodiarana Diamondra Fitotoana Vary
Takelaka fitotoana diamondra
Kodiarana fitotoana PCD
Takelaka fikirakirana PCD
Ny fifantohana diamondra avo kokoa, ny fiainana lava kokoa ary ny hafainganam-pandehan'ny fitotoana miadana?
Rehefa milaza isika fa tsara na ratsy ny kiraro fikolokoloana diamondra, matetika isika dia mihevitra ny fahombiazan'ny fitotoana sy ny ain'ny kiraro fitotoana. Ny sehatry ny kiraro fikosoham-bary dia mifangaro amin'ny fifamatorana diamondra sy vy. Amin'ny maha-asany lehibe ny fatorana vy dia ny mitazona ny diamondra. Noho izany, ny haben'ny diamondra sy ny fifantohana ...
PCD (diamondra polycrystalline) dia diamondra sentetika izay ampiasaina amin'ny fampiharana tsy ferrous, manana hamafisana ambony, tanjaka avo lenta ary fananana mitovy fanamiana, ary koa fanoherana tsara ny fitafiana sy fitondra hafanana avo. Fitaovana fikosoham-bary PCD gorodona natao hialana amin'ny exploy, loko ...
Ny vidin'ny vovo-by silida azôty dia nitombo mihoatra ny 20% isan-taona
Tamin'ny volana aogositra, ny vidin'ny vovo-dronono vyide silika (Si: 48-52%, N: 30-33%, Fe: 13-15%), ny vidiny lehibe eo amin'ny tsena dia RMB8000-8300 / taonina, izay manodidina ny RMB1000 / taonina ambonimbony kokoa noho ny tamin'ny fiandohan'ny taona, fiakarana manodidina ny 15%, raha ny fiakarana kosa dia nihoatra ny 20% ...
Kodiarana miendrika diamondra miorina amin'ny alimina
Famaritana: Diameter: 4 ″ / 100mm, 5 ″ / 125mm; Haavon'ny faritra 8mm; M14 na 5 / 8-11 Thread; Grit # 30, # 50, # 100. (Alefaso azafady ny fiangaviana ny kofehy 5/8-11 matetika ampiasaina ao amin'ny tsenan'i Amerika Avaratra) Fampiharana: Ho an'ny Granite, marbra, beton, brock… .. Feature: 1. # 30 ho an'ny dingana voalohany c ...
10.5 ″ Takelaka miova haingana ho an'ny takelaka vy enina
Ny Plate Base ho an'ny Metal Trapezoid - 270mm, Six Bays dia singa iray amin'ny The Fast Change System (FCS). Ity dia rafitra mora ampiasaina magnetika SNAP-ON / SNAP-OFF ho ​​an'ny mpanao diamondra. Raha vantany vao tafapetraka ny Base Plate, dia TSY mila esorina mihitsy izy io. Manasongadina ny consis plate plate base ...
Trapezoid diamondra beton fitaovana fanosotra poloney pad fikosoham-bary kiraro
Diamond Grinding plate no fitaovana malaza indrindra amin'ny gorodona, ny famolavolana fanovana mora ary mitahiry fotoana hanovana ny kiraro fitotoana. Tsy mila visy sy bolt fa alao tanana fotsiny. Ny famolavolana wedge dia afaka manao ny kiraro fikosoham-bary mampifandray ny masinina ampy tsara. Ny karazana fatorana dia manomboka amin'ny s ...
Inona no ataon'ny loha fanapahana diamondra?
Ny fitaovan'ny fitaovana diamondra dia mifamatotra akaiky amin'ny fepetra enta-mavesatra, noho izany ny fiasa fanodinana dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fitafiana, ary ny atin'ny lohan'ny diamondra dia misy fiovana lehibe ihany koa. Amin'ny ankapobeny, ambany ny atin'ny diamondra ary ambany ny fampiasana herinaratra, na izany aza, raha ...
Inona ny teknikan'ny segondra diamondra?
1.Fitsanganana sy fiakaran'ny maripana mandritra ny fanesorana mafana, ny vovo-dronono hovonoina dia alefa amina habe iray, izany hoe, mandritra ny fanerena mafana, dia misy tsindry apetraka amin'ny vovoka aloha, ary avy eo ny atsangana ny temprature. Amin'ity sta ...
Diamond Fitotoana Vary amin'ny valiha samy hafa sy ny endriny toradroa na endrika boribory, lasaka tamin'ny laser na volafotsy avo lenta nohosorana tamin'ny fikosoham-bolo namboarina tamin'ny fanovana mora foana, hidin-trano, hidin-trano redi, avy eo amboary ny milina fitotoan'ny gorodona, ny fitotoan'ny gorodona, ny poleta amin'ny gorodona, ho an'ny gorodona beton, gorodona vato, terrazzo concre ...
FOMBA FIDIANA FIDIANA VOLA VOLOMBELOMANA DIAMOND
Ny kodiarana fitotoana diamondra dia misy sokajy samihafa, ny vatana mizara ho mafy, antonony, malefaka sns. Mizara ho masiaka, salantsalany, tsara sns ... izy ireo, ka samy manana ny kalitao sy ny fampiasana samy hafa. Rehefa misafidy ny kodiarana fitotoana diamondra isika dia afaka misafidy ny tsara mifanaraka amin'ny ...
Misy karazany 3 ny lelan'ny tsofa diamondra: tsofa tsofa miovaova, fantsom-boaloboka voafatotra ary lelan'ny tsofa elektrika (brazed). 1.Volom-boavola diamondra voamadinika: ampidiro ny sinter-tsindry mangatsiaka sy ny fantsom-panafihana mafana, ary avy eo notampenana sy namboarina tamin'ny famolavolana. 2.Vita tsofa vita amin'ny vy: ampidiro ny brazing sy ny lasera laser ...
Saw tariby diamondra:
1.Diamond Wire Saw Fa Quarry: Mamporisika tariby fingotra izahay, afaka miaro tsara ny tady mahita tariby izany ary mampitombo ny tanjaky ny tariby. Ny fingotra dia misy fanoherana tsara ny hafanana, ary azo ampiasaina izy io rehefa tsy ampy ny rano. Ny fihenan-kery matanjaka dia afaka mampihena ny olana mianjera amin'ny lafiny 2.Diamond Wi ...
Raha te hahalala bebe kokoa ianao dia afaka mandeha any amin'ny Alibaba izahay